1 Ndị Eze 17 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ndị Eze nke Mbụ 17:1-24
Ịlaịja buru amụma na mmiri agaghị ezo n’Izrel (1)
Ugoloọma nọ na-ewetara Ịlaịja nri (2-7)
Ịlaịja gara na nke otu nwaanyị isi mkpe na Zarefat (8-16)
Nwa otu nwaanyị isi mkpe nwụrụ, a kpọlite ya n’ọnwụ (17-24)
17 Ịlaịja,*+ onye Tishbe, nke dị na Gilied,+ wee sị Ehab: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke Izrel dị ndụ, onye m na-efe,* na-aṅụ iyi na igirigi agaghị ada, mmiri agaghịkwa ezo ruo afọ ole na ole, ọ gwụkwala ma m̀ kwuru ka o zoo.”+ 2 Jehova gwaziri Ịlaịja, sị: 3 “Si ebe a gaa ebe ọwụwa anyanwụ ma zoo na Ndagwurugwu* Kirit, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan. 4 Na-aṅụ mmiri dị na ndagwurugwu ahụ. M ga-ezikwa ugoloọma ka ha na-ewetara gị nri ebe ahụ.”+ 5 Ọ gara ozugbo mee ihe Jehova kwuru. Ọ gara nọrọ n’akụkụ Ndagwurugwu* Kirit, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan. 6 Ugoloọma na-ewetakwara ya achịcha na anụ n’ụtụtụ nakwa achịcha na anụ n’anyasị. Ọ na-aṅụkwa mmiri dị na ndagwurugwu ahụ.+ 7 Ma, ka oge na-aga, mmiri dị na ndagwurugwu ahụ tara,+ n’ihi na mmiri kwụsịrị izo n’obodo ahụ. 8 Jehova gwaziri Ịlaịja, sị: 9 “Bilie gaa Zarefat dị na Saịdọn, nọrọkwa ebe ahụ. M ga-agwa otu nwaanyị isi mkpe nọ ebe ahụ ka ọ na-enye gị nri.”+ 10 O biliziri gawa Zarefat. Mgbe o rutere n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, ọ hụrụ otu nwaanyị isi mkpe nọ ebe ahụ na-akpa nkụ. Ọ kpọrọ ya, sị ya: “Biko, kutetụrụ m mmiri ka m ṅụọ.”+ 11 Mgbe ọ gawara ikute ya, ọ kpọrọ ya, sị ya: “Biko, wetatụkwara m achịcha.” 12 Nwaanyị ahụ wee sị ya: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke gị, onye dị ndụ, na-aṅụ iyi na enweghị m achịcha ọ bụla, ma e wezụga obere ntụ ọka dị ná nnukwu ite nakwa obere mmanụ dị n’obere ite.+ M na-akpata obere nkụ. M ga-agakwa mee achịcha mụ na nwa m ga-ata. Anyị tachaa, anyị echerezie ọnwụ.” 13 Ịlaịja asị ya: “Atụla egwu. Gaa mee ihe i kwuru. Kama buru ụzọ si ná ntụ ọka ahụ mee obere achịcha wetara m, gị agazie mee nke gị na nwa gị ga-ata. 14 Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, sị: ‘Ntụ ọka ahụ dị ná nnukwu ite agaghị agwụ. Mmanụ ahụ dị n’obere ite agaghịkwa agwụ ruo ụbọchị Jehova ga-eme ka mmiri zoo.’”+ 15 Nwaanyị ahụ gaziri mee ihe Ịlaịja gwara ya, nke mere na ya na ezinụlọ ya na Ịlaịja nwere nri ha nọ na-eri ruo ọtụtụ ụbọchị.+ 16 Ntụ ọka ahụ dị ná nnukwu ite agwụghị, mmanụ ahụ dị n’obere ite agwụghịkwa, otú Jehova si n’ọnụ Ịlaịja kwuo. 17 Mgbe ihe ndị a mechara, nwa nwaanyị ahụ dara ọrịa. Ọrịa ahụ mechakwara ka njọ, nke na o gburu ya.+ 18 Nwaanyị ahụ wee sị Ịlaịja: “Onye nke ezi Chineke, gịnị ka m mere gị?* Ị̀ bịara ebe a ka i chetara m mmehie m, gbuokwa nwa m nwoke?”+ 19 Ma Ịlaịja sịrị ya: “Kunye m nwa gị.” O kunyere ya nwa ahụ, ya ekuru ya gbagoo n’ọnụ ụlọ dị n’elu, bụ́ ebe o bi, nyiwe ya n’àkwà* ya.+ 20 Ọ kpọkukwara Jehova, sị: “Jehova bụ́ Chineke m,+ gịnịkwanụ mere i ji mee nwaanyị isi mkpe a m bi n’ụlọ ya ihe a, kwe ka nwa ya nwụọ?” 21 O hulataziri n’elu nwa ahụ ugboro atọ ma kpọkuo Jehova, sị: “Jehova bụ́ Chineke m, biko, mee ka nwatakịrị a dịghachi ndụ.” 22 Jehova nụkwara arịrịọ Ịlaịja,+ nwatakịrị ahụ adịrịghachi ndụ.+ 23 Ịlaịja akpọrọzie nwa ahụ, si n’ọnụ ụlọ ahụ dị n’elu kpọdata ya, banye n’ọnụ ụlọ ha ma kpọnye ya nne ya, sị: “Lekwa nwa gị. Ọ dịla ndụ.”+ 24 Nwaanyị ahụ asị Ịlaịja: “Ugbu a ka m matara na ị bụ onye nke Chineke n’eziokwu+ nakwa na ihe Jehova gwara gị kwuo bụ eziokwu.”
^ Ịlaịja pụtara “Chineke M Bụ Jehova.”
^ Na Hibru, “onye m guzo n’ihu ya.”
^ Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ma ọ bụ “gịnị jikọrọ mụ na gị?”